Iifonti ezili-15 kufuneka ukuba zibe neefonti zoyilo, simahla! | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Iifonti ezintsha ezili-15 kufuneka-zibe nazo, simahla!
UMelisa Perrotta | | Idizayini yeMifanekiso, Imithombo
Kwiminyaka yakutshanje sizibonele Ukukhula kwemakethi yokuchwetheza. Le yindlela esibone ngayo ukubonakala kokuphindaphindeka kweentsapho ezintsha zohlobo lohlobo, zombini i-serif, i-sans serif okanye iskripthi kunye nefantasy okanye iindlela ezithandwayo.
Le nto yokusekwa kwetayipu njengobugcisa kunye nobugcisa ikakhulu inxulumene ne ukukhula kwamajelo eendaba kunye needigital. Ngale ndlela, ukwanda koyilo lwedijithali kwenze ukuba kube yimfuneko ukwahlula iifonti ezifanelekileyo zokubonisa. Kwelinye icala, inokunxulumana nokudalwa kweenkqubo zoyilo lokuchwetheza eziququzelela ukuyilwa kwazo.
Ngokungafaniyo noyilo olugqibeleleyo lweSwitzerland School; apho oovimba babenqunyelwe kwiimilo ezisisiseko zejiyometri, iigridi ezijikelezileyo, kunye nokusetyenziswa kwemibala eqinileyo; umyili wangoku uneentlobo ezininzi zeefonti ezimvumela ukuba aphuhlise iiprojekthi ze umboniso omkhulu wokuyila.
Xa kuthelekiswa noyilo lwesiqingatha sokuqala senkulungwane yama-XNUMX, namhlanje ngokungathandabuzekiyo maninzi amathuba okuveliswa kwemizobo. Oku kunokubalelwa kwinxalenye ye- iyantlukwano yezixhobo zemizobo esinokuthi sizisebenzise. Yile ndlela esinokufikelela ngayo kumgangatho olungileyo kunye nezixhobo ezisemgangathweni. Kule meko, luxanduva lomyili ukuba azi ukuba uza kusetyenziswa nini kwaye phi.
Nangona kunjalo, okuyinyani kukuba ukuza kuthi ga ngoku bekukho kakhulu Iintsapho ezimbalwa zefonti abakwaziyo ukukhuphisana ne-Helvetica ethandekayo, iBaskerville, iGill Sans, uGotham kunye noodade wabo.
Apha ngezantsi sikubonisa iifonti zangoku ezili-15 eziyimfuneko kuyilo lonke lomyili kwaye sikunika amakhonkco ukuze ukwazi khuphela usapho lwefonti SIMAHLA!
1 Imyuziyam yaseSans
4 IiCentrale Sans
5 Vula iiSans
6 Imvelaphi sans
8 IBebas Neue
9 IAlégre iSans
10 URoboto Slab
12 Isicatshulwa esibomvu
I-typography enobubele kulowo nalowo kubunzima bayo. Umahluko ophantsi kunye nokugqibelela kokubonisa kunye ne-analog.
Iindidi zayo ezintathu zinempawu zesitayile esimnandi sanamhlanje.
Bambiza ngokuba ngu Helvetica entsha. Isetyenziswe kwiiwebhusayithi ezingaphezulu kwama-25000 kwaye i-anatomy yayo iyenza igqibelele kulo naluphi na uhlobo lweprojekthi.
Lo ngumthombo we uninzi lwewebhusayithi. Inobunkunkqele kodwa yeyangoku kwaye eyona nto iphambili kuyo iyafundeka.
Uhlobo lohlobo lohlobo olwenzelwe ukusetyenziswa Umboniso okungagqibekanga. Ke, yindlela ukufundeka kwayo kufaneleke ngayo.
Uhlobo lochwethezo olwamkelwe kwifayile ye- Inkqubo yokusebenza yeapile. Njengazo zonke iimveliso zeApple le fonti ilunge ngokugqibeleleyo.
Uhlobo lokuchwetheza ethandwa kakhulu Kule minyaka ilishumi idlulileyo. Ukusetyenziswa kwayo kuye kwasasazeka kwaye kungumntu ophambili kwiiposta ezininzi kunye neempawu.
UAlégre unokuba ngu indawo egqibeleleyo YeBebas. Zahlukile kukerning nakwezinye ii-angles.
Ibe lusapho oludumileyo ngenxa yayo ubunzima obungasindi kunye nobume obunamandla eyenza ukuba ilungele iiprojekthi zeli xesha, ezibuthathaka kunye nezithandekayo.
Luhlobo lwentlobo yeSerif eneempawu eziqinileyo kodwa nge Ukuphela kwesimbo sokubhala Unokufumana inguqulelo yayo yeSans Serif.
Ayisiyiyo enye yeefonti zangoku ezithandwayo, kodwa iimpawu zayo ziyenza igqibelele iiprojekthi zeanalog kunye neetekisi.
Iqabane lihlobo lohlobo lweSerif kwisicatshulwa. Yibane Isitayile esomeleleyo sigqityiwe ngokugqitywa ngokubanzi kwe-calligraphic enika ubuntu kunye namandla.
Luhlobo lohlobo lwe-serif olunobuntu obukhulu, isitayile esibuthathaka kunye nomzimba ophezulu ilungele ukubonisa kunye nemibhalo emifutshane.
I-Warnock yeyona ilungileyo yobudoda Serif typeface kwaye yomelele kodwa intle kwaye iphucukile ikhona.
Ngaba uyazi ezinye iifonti ofuna ukuzongeza kuluhlu? Yishiye kwizimvo
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izibonelelo » Imithombo » Iifonti ezintsha ezili-15 kufuneka-zibe nazo, simahla!
Ndirhumele kweli phepha kuba lihlala linomxholo onomdla, enkosi kakhulu ngawo wonke lo msebenzi unesisa. Ngokubhekisele kwiSan Francisco, enye efumanekayo yokukhuphela ayifani naleyo ikwisampulu: mhlawumbi yonke into yimpazamo yam kwaye ndikhuphele into engekhoyo, kodwa ukuba umzekelo ubona «y» yesampulu kule iphepha kwaye emva koko uye kwikhonkco nje ukuba ungene (ngaphandle kokufuna ukukhuphela) uyabona ukuba u "kwaye" akafani. Le apha ibonakala intle kwaye intle kakhulu, ucinga ukuba umbono wam awulunganga, uyazi ukuba ndingayifumana phi okanye ubuncinci ibizwa ngokuba yintoni? Ndiyabulela kakhulu!
Inokubonakala njani indawo yokusebenzela egqibeleleyo njengomyili?
Uhlengahlengiso oluzenzekelayo lweAdobe Lightroom ngoku lisebenzisa iArtificial Intelligence